Izibalo ziholela emibhalweni edabukisayo - ngokusho kwakhe, ngamaphesenti angamashumi ayisishiyagalolunye nesishiyagalolunye abesifazane abashadile, ngokushesha noma lapho bebhekana nenkinga ebizwa ngokuthi ukuhlubuka komyeni, noma banesizathu esihle sokukholelwa ukuthi kuzokwenzeka. Abesifazane abaningi bayothi ngokuthukuthela - yini abalahlekile (amadoda)? Abesifazane balandela lesi sibalo, zama ukuba mnandi no-sexy, banakekele indlu, kodwa konke lokhu akunikezi isiqinisekiso esigcwele sokuthi ukungathengi ngeke kwenzeke.
Ngisho nalabo abanolwazi oluningi futhi abanolwazi ezindabeni zomndeni, izazi zezokwelapha azikwazi ukunikeza impendulo eqondile, okusho ukuthi, ngemva kwakho konke, kuholela ekukhawuleni umyeni wakhe. Kuzo zonke izimfihlakalo zengqondo yabesilisa kuyisola futhi ukuthi umuntu ngamunye unobuntu bakhe obuhlukile, ngakho akunakwenzeka ukunikeza impendulo engavamile kulo mbuzo. Ukubaluleka kwenkinga kuncishisiwe ukuba kube nezinhlamvu ezihlukahlukene zesilisa, uma sibahlola ngokuningiliziwe, kungenzeka ukuthi izimfihlo zesimo senkolo yesilisa ziyokwembulwa, ngoba abameleli bobulili obunamandla bashintsha abashade babo ngezizathu ezihlukahlukene. Yingakho ukubaluleka kokwazi uhlobo lwesigamu sakho sesibili kubaluleke kakhulu, bese udinga ukwakha ukuziphatha kwakho okusekelwe kulolu lwazi.
Amadoda angahle ahlukaniswe ngokomzimba abe ngamaqembu amaningana ahlukile embonweni wabo ngokuphila, ukuziphatha kanye nezinye izici. Cabanga ngohlobo lokuqala, "uthando". Amadoda anjalo azama ukuzama into entsha, ukungabi khona kwezinguquko empilweni yabo kucindezela futhi kubenze bafune intsha. Uyabona imilenze emincane yowesifazane ongajwayelekile hhayi njengowesilisa, kodwa njengephayona lento ayengazi.
Ukuze "u-romanticist" abe yiqiniso kuwe, akufanele neze ubikezele, ngaphandle kwalokho uzolahlekelwa yithakazelo kuwe futhi afune ukufuna okuthile okusha. Izambatho zangaphansi kanye nesigqoko sokugqoka owesifazane ohlala "ne-romantics" kufanele simangele njalo. Kubalulekile ukuthi, ekubukeni, ngaso sonke isikhathi into ethile akufanele ikwazi ukubona, ngisho nemininingwane encane kakhulu. Umuntu onjalo uyoba usizo ngezikhathi ezithile ukunikeza imbangela yomhawu, kodwa, ukuhlukanisa ubudlelwane bobulili nokuletha izinto ezimangalisa, umfazi "wokuthandana" angavimbela kalula noma enze ukuhlukunyezwa kungenzeki.
Olunye uhlobo lomuntu - "i-macho", ludinga indlela ehlukile. Lapha isimo siyinkimbinkimbi kakhulu, ngoba amadoda anjalo ezingeni elingenakuqhathaniswa alangazelela izinjabulo, kungakhathaliseki ukuthi ukudla okunomsoco, iziphuzo okumnandi kanye nobuhlobo obuseduze. With "macho" kulula kakhulu ukwenza uthando, kodwa ukushada kusho ukuthatha izingozi. Uma usenayo indoda-macho, zama ukufanisa izifiso zalowo muntu. Isimo sezulu, ukukhululeka, ukuhlukahluka kuzokuphoqa "i-macho" ukuba ihlale ekhaya nomfazi onjalo omuhle futhi ingaboni okuthile ohlangothini.
Izimfihlo zesimo sengqondo zesilisa zivame ukuthi kunezimo eziphikisanayo. Isibonelo, amadoda anezinkinga ezinkulu, angaba "donzhuonyami ngokungenasici." Lolu hlobo lwamadoda luvame ukushintsha kubafazi babo, kepha akufanelekile ukuwagxeka kakhulu, ngoba ziyizisulu zokukhuliswa nezimo. Izinkimbinkimbi ezitholakala ebuntwaneni, zihlala namadoda anjalo empilweni. Uma ebuntwaneni engenalo uthando olwanele, wayehlale ehlaselwa yizontanga zakhe, engena eminyakeni ekhulile, "uDani Juan willy-nilly" ufuna ukuthola uthando olungathandeki. "I-Donjuan" kufanele ikhunjulwe ngaso sonke isikhathi ukuthi yiziphi izinto ezihlakaniphile, abanolwazi, futhi ngokujwayelekile, kakhulu kakhulu. Le ndlela, cishe, izophoqa indoda ukuba ingaboni ohlangothini.
Cabanga ngohlobo lwesilisa lokugcina - "homebody". Uma unomlingani onjalo empilweni, njalo udale indawo yakhe yokuhlala, egcwele induduzo kanye nobudlova. "I-Domodedones" iyakwazisa ukuphila kwasekhaya okuthula, ukudla okunomsoco, ubuhlobo bobulili obulinganiselwe njalo, ukuzinza empilweni. Ukuthi "umuntu ohlala ekhaya" waya enkohlakalo, udinga ukwakha izindlu nje izimo ezimbi kakhulu. Futhi ungazami ukuphoqelela umyeni onjalo ukuthi abe nomhawu - kungase kuphazamiseke!
Ngokuvamile, zama ukuthatha ukunakekelwa okungaphezulu kwesigamu sakho sesibili, ubanakekele, ukhulume amazwi ahlabayo kanye nazo zonke izimfihlo zengqondo yesilisa kuyoba ngaphambi kokuvula.
Amaqiniso ambalwa amangazayo mayelana nobaba ozayo
Ingabe kuvamile uma umuntu ehambela amasayithi e-porn nsuku zonke?
Indoda-yazala: izinzuzo nezinkinga
Iyini impumelelo yentandokazi yabesifazane?
Inganekwane iphupho elingenakwenzeka?
Indlela yokunakekela izinwele ebusika?
I-Pilates isebenziseka kakhulu
Amazambane abhakiwe ngebhethoni